XAASKEYGA JINNI BEY KA AHAATAY qeybtii 15aad oo caawo xiiso leh. – Filimside.net
XAASKEYGA JINNI BEY KA AHAATAY qeybtii 15aad oo caawo xiiso leh.
Sheekada waxay noo mareysay markuu arooskii xasan iyo amal dhacay.
Markaas ayaan laabteyda ku qabtay anigoo in mudo ahna shuminaayay markaas ayaan waxaan dareemay inaan hawada sare heebaabayo, isla markaasna dhulkana uu gabay awoodiisii soo jiidasho ama in ruuxdeydiiba jirka ka baxday waxaana ahaa mid baashiyeeya iyada anoo ku jiray ilbiriqsiyo aanan rabin in waligooda dhamaadaan.
Markii aan indhaha kala furay waxaan is arkay anoo joogo meel aanan waligey horay u arkin xitaa kuma fikirin waligey in meeshaan oo kale jirto.
Markaas ayay ii dhoolo cadeysay amal waxayna igu tiri “haa xabiibii beerteena quruxda badan ayaad dhexjoogtaa”
Subxaanallaah maxaa meeshaan ka qurux badan? Waxaa ceeb ka hufan allihii abuuray nimcadaan quruxda badan, wee geedo iyo beer aanan waligey horay u arkin waxaase iiga sii darneyd markaan cirka fiiriyay oo aan arkay xidigihii waxaadba moodaa dahab la dhalaaliyay oo ifaya horteedana taagan.
Runtii waxkasta waxay ahaayeen sidaan u aqaanay kuwa waxbadan ka duwan.
Markaas ayay amal igu dhahday xabiibii kaalay aan kusoo tusee wax aadan noloshaada horay u arkin.
Markaas ayay I waday iyadoo gacanta igu dhagan waxayna igu soo wareejisay meelkasta anigana kaliya waxaa iga soo haray fajac iyo yaab mana is dhaheynin aduunkaan guudkiisa waxaa saran wax amal kaa mashquuliyo lkn waa arkay anigoo yaaban ayaan sujuud la dhacay anoo u sujuuday allihii khaaliqa ahaa ee abuurkaan cajiibka ah abuuray.
Markaas ayay igu dhahday xabiibi indhaha isku qabo waxaa noo hartay meel aan rabo inaan ku tusiyee.
Markaas ayaan indhaha isku qabtay iyadana gacanta inta iqabatay ayay I kaxeesay markasta oo aan sooconana waxaan dhahayay ma imaanay? Waxayna iigu jawaabaysay sabar wali waayee ilaa ay markii dambe ka istaagtay kadibna garbaha ayay si tartiib ah iiga qabatay iyadoo I dhunkatay dhunkasho jaceyl oo aad u macaan badan markaas ayay igu dhahday “hada indhaha waad kala furi kartaa”
Yaa allaah waxaan arko waa maxay mise janadii ayaaba I hor taagan… tolow ma janadii cadanbaa mise waxkalaa jiro waxaan arkaa bad yaro aad quruxdeeda la yaabeysid waxaana ka burqanayay todobo ilood kuwaasoo biyaha ku shubayay jiho kastaa waxaana biyaha badaas kasoo baxayay uumi aad u qurux badan kaasoo jawiga dhan mid heersare ah ka dhigay.
Markaas ayaa waxaa igu dhalatay fikrad ah inaan dharka iska siibo oo aan biyahaas ku dhex dabaasho muuqaalka meeshana wuxuu ahaa mid aad u fiican markaas ayaan u dhawaaday badii anoo qarka u fuulay inaan biyihii taabto hase yeeshee amal ayaa iga qabatay iyadoo ku qeylineyso “iska jir hadii kale wey ku gubayaan”
Gacanteydii ayaan dib usoo ceshtay hase yeeshee waa rumeysan waayay hadalka ama ee ah in biyahaan I gubayaan markaas ayaan marlale gacanta u taagtay iskuna oo biyihii dhex galiyay hase yeeshee markii aan saas u galiyay ayaan horay ka siibay waxay ahaayeen biyo aad u kulul markaas ayaan aad u cabaaday xanuun dartiis anigoo leh “ alla maxaa igu watay oo aan gacanteyda kala doonay” waxaanba mooday xanuun dartiis in naartii jahanamo aan gacanta lagalay.
Markaas ayay amal isoo fiirisay waxayna igu dhahday “hadalkeyga waad fududeysatay laasim inaad gubato ayay aheyd” markaas ayay il kale oo biyo ka burqanayaan igeysay oo ay igu tiri kuwaan gacantaada gali hase yeeshee waan ka cabsaday anoo ka baqay in asna I gubo.
Markaas ayay amal sidii ilmo yar oo cabsanaayo iisoo fiirisay iyadoo igu qosleyso waxayna igu dhahday “xabiibi ha cabsan ee gacanta biyaha gali” hase yeeshee geesinamadaas waa yeelan waayay anoo wali maankeyga ka guuxaayo xanuunka uu igu haayo biyihii hore markaas ayay amal igu qeylisay iina sheegtay inaan tijaabiyo oo aan gacantan galiyo.
Waxayna igu dhahday intuusan waqtiga ivu kugu dhamaanin gacanta biyaha gali hadui kale waligaa ma dawooweysid” haseyeeshee wali waan kasii madax adeegay markaas ayay amalinta I qabatay iskuna key duubtay ilaa ay bishimaheeda iyo kuweyga istaabtaan kadibna biyihii labadeena oo isku dhagan na galisay markaas ayaan waxaa dareemay qabow aad u daran.
Amal ayaa markaas inta gacanteeda soo qabatay ku masaxday gacanteyda ilaa uu xanuunkii iga daayay gacantiina ii biskootay isla markaasna caadi ii noqotay.
Waxay markaas igu tiri imaqal biyaha ilaha ah ee todobada sadaxdaas wey kulul yihiin afartaana wey qaboow yihiin lkn dhamaantooda badyarada oo dhulka ku taalo ayay isugu yimaadaan.
Markas ayaan ku dhahay oo anaga hada dhulka miyaan joognaa?
Waxay iigu jawaabtay xagee u maleysay inaan joogno? Anaga waxaan joognaa dhulka guudkiisa.
Markaas ayaan waxaan ku dhahay aniga waxaanba islahaa dhulka ma joogtaan waxaana u maleynaayay inaan aduunkiina joogno.
Markaas ayay igu dhahday malahaaga waa sax waxaan joognaa aduunkeena.
Anoo yaaban ayaan ku dhahay oo hada soo iguma dhihin dhulka ayaan joognaa?
Markaas ayay igu dhahday; ha igu kalifin xasanow inaan nacas saacaan kugu tilmaamo wayna qososhay waxayna I dhahday aduunkeena waa dhulka korkiisa mana ahan meere kale anaga waxaan joognaa meel dhulka kamid ah oo uusan wali insaanka gaarin maxaad u maleysay dhulka? Xaqiiqdii waa mid aad u weyn insaanka waxa uu ka yaqaanana dhulka waa wax aad u yar aadna u basiid ah hadii aad sii raadisaana nolosha dhabta ah waad arki laheydeen, meerayaasha kale soo ma ahan aniga xitaa waxba kama aqaano waxaana ka maqlaa aqoonyahanada aduunkeena in aduunyo kale ku taalo meerayaashaas taasoo aan aduunkeena aheyn, waxaan kale oo ogahay in uu xiriir ka dhaxeeyo aduunyooyinkaas iyo aduunkeena hase yeeshee wali ma gaarin da’dii ii saamaxaysay inaan waxbadan ka ogaado arimahaas ogowna aniga inaan ahay mid qanaaco badan waxaana igu filan inta aan ka aqaano ninkeyga iyo aduunkiisa markaas ayay qososhay waxayna igu tiri anoo og dhibaato kasta oo aan kaala kulmaayo ayaan hadana ku jeclaaday aduunkaagana jeclaaday mid kamid ah doqomadiisana guursaday soo saas ma ahan?
Markaas ayaan ku dhahay amal ihaanada maad iga dhaaftid waxayse iigu jawaabtay ma ahan ihaano ee waa xaqiiqo, markaas ayaan inta xoogaa biyo ah gacanta ku qabsaday ayaan ku firjiyay…..
La soco qeybta 16aad oo xiiso leh.
Haddii aadan aqrisanin sheekada qaybta 14-aad fadlan RIIX HALKAAN